उपेन्द्र यादवद्वारा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई समर्थन ! - Movies Trends
उपेन्द्र यादवद्वारा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई समर्थन !
काठमाडौं, पुस १३ । अब बन्ने सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई समर्थन गर्न सकिने जनाएका छन् ।
यादवले संविधान संशोधनका विषयमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले लचिलो हुने संकेत देखाएका कारण आफ्नो पार्टीले ओलीलाई समर्थन गर्दै ओलीको नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुने बताएका हुन् । आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको एउटा कार्यक्रमको अन्तरवार्ताका क्रममा भने, ‘ओली जीले सरकारमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । निश्चित रुपमा हामी सरकारमा जान्छौँ । तर हामीले उठाएका मुद्दामा उहाँहरु सहमति भएको खण्डमा मात्रै बताएका छौं । यदि हाम्रा मुद्दाका विषयमा एमालेले सहमति जनाउछ भने हामी सरकारमा निश्चय पनि जान्छौं नै।
यादव यदि संबिधान संसोधनमा एमाले सहमत भएको खण्डमा बाम गठबन्धन सरकारमा आफुहरु पनि जाने बताए। अन्तमा उनले भने, ‘दुई तिहाई पुग्ने भएकोले पनि सकेसम्म वाम गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकारबन्नु देशका लागि राम्रो हुन्छ, भलै त्यसमा हामी पनि सहभागी अवस्य हुने छौं ।’
यदि तपाईले सपनामा यी ५ कुराहरु देख्नुभयो भने हुनेछ अचानक धन लाभ!
यौन सन्तुष्टिको हिसाबले मोटी कि पातली युवती ठिक ?